Sanadka cusub Happy 2015 – Maxaa ku jira dukaanka?
January 1, 2015 by dalabyo 3 Comments
Hello qof walba,
Just doonayay inuu sameeyo writeup degdeg ah oo ku saabsan waxa qaababka ee la qorsheeyey inay sannadka soo socda:
Editor xarig Backend – habkaani ku saabsan tahay 80% complete by hadda, waxaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u arkaan Xariga geliyo in database iyo in ay sameeyaan qaar ka mid ah falalka on kuwa. Waxyaabaha in haatan ay aad u adag tahay sida qaadista dhan turjumaadaha ka turjumaan hal noqon doonaan SNAP ah. Habkaani waxaa la filayaa in la sii daayo in dhowr toddobaad.
Taageerada Widgets buuga abuse – qorayaasha widget caadadii waxa ay ka cabanayeen (iyo kaan si) oo ku saabsan xaqiiqada ah in dayactir in ciidamada dib ugu ah Widgets ah. Fikradda asaasiga ah waxay noqon doontaa in ay u oggolaadaan faylasha qaar si ay jiraan fogaan oo ka kaaftoomi doono in. Tani waxay sidoo kale laga yaabaa in la furo ilaa doorasho ee buugga a widget soo bax taas oo noo ogolaan doonaa inaan ku siin doorasho badan ee Widgets aan uu sicir-size file plugin ah.
Editor xarig Frontend – taasi abuuri doonaa qaar ka mid ah interface in Xariga ku yaal bogga, in aan marka “wysiwyg” ogolaan doonaa qaar ka mid ah aalada fiican, inta badan oo la xiriira sixiddiisa Xariga Meta iyo Xariga kale oo qarsoon, iyadoo nasiib qaar ka mid ah, Ajax turjumaadaha sidoo kale jiri doona editable ka dib casriyayn this. Tani waxay la mid qaadan doonaa dhowr bilood inay yimaadaan.
Taageero nidaamka tireedyada – habkaani si toos ah kuu turjumi doonaa tiro ka nidaamka Yurub tireedyada in Carabi iyo Hindi nidaamyada (iyo malaha qaab ciyaareedka kooxdiisa). Mid aan ku xusneyn muhiim ah, laakiin muujinta fiican ugu dhaqsaha badan soo socda in parser kuu dhow.
Dhexgalka Menu WP – ma mid aad isha ku run ahaantii waxan u samaynaysaan, dhici doona, laga yaaba in aysan.
Wixii faallooyin iyo fikrado la hoos ku soo dhaweeyay doonaa, haddii ay macno samaynayaan waxaan ku daraynaa doonaa in aynu shaqo. Haddii aad run ahaantii aad dooneyso in aad kor u muujinta a aad yaabaa koodh ah, nala soo xiriir via foomka.
Sanadka cusub Happy!
Version 0.9.6.0 – Ugu dheer daahsan, sii daayay maalintii ugu gaaban
December 21, 2014 by dalabyo Leave a Comment
Version Tani waxay ku darayaa cusub toban luqadood Google turjumi ayaa dhawaan ku daray. In la sii daayo ayaa diiradda saarayeen la dagaallanka digniinaha iyo cayayaanka in cuduradaas oo Transposh sannadkii la soo dhaafay.
Mid ka mid ah wuxuu isu weydiisan kartaa, haddii software ma aanay is badalin, sida cayayaanka yimaadda ayaa cuduradaas in? Jawaabta in uu yahay mid fudud, software ah in aanu jirin meel bannaan, wax waqtiga oo dhan la beddelo, versions cusub ee PHP daray digniin adag taas oo soo dhibtay dadka qaar, waxaa jiray releases cusub ee component software WordPress oo kale, iyo sidoo kale ku badaleen kuwwi engine Ilaaha Qaadirka ah Google turjumi. Isbedel Kuwa abuuray xaalado code hadda ma uu karin inuu xamili, laakiin waxaan jeclaan lahaa in this version cusub uu noqon doono ka sii yara awoodaa inuu sameeyo.
Walax kale ee cusub waxaa ka mid ah sitemaps dhexgalka Yoast SEO (Waxaad u baahan tahay inaad dhayida, tilmaamaha waa in aynu code).
Muuqaalka yar in ay ka saarto tareynin auto turjumaadaha (halkaas oo loo turjumey waxay ahaayeen siman u Xariga asalka, kaas oo dhacaya marka goobaha qaar ka helay hor istaagay Google)
alaabtayda oo dheeraad ah, file ka readme.txt waa saaxiibkaa.
Version 0.9.5 – Wareegtada ayaa laga badiyay
February 11, 2014 by dalabyo 8 Comments
Version 0.9.5 lama sii dayn aad u dheer ago, iyo nooca buuxa 0.9.5.1 ayaa la sii daayey iyo waliba. Naftaada Waxaad codsan kartaa, Waxaan doondoonayaa updates in aan dashboard wordpress oo aanan wax, sida yimaado?
Tani waa sababta dhabta ah 0.9.5 yimid si ay nolosha, waxaa jiray wax yaabihii kale oo muhiim xiriira isbeddel lagu sameeyo ee api Wareegtada ayaa by WordPress 3.8 taas oo ka dhigtay Transposh xannibi oo dhan updates (oo ay ku jiraan gaarka ah) muraayadda.
Sidaas, waxa la sameeyo?
Si-tiraysa in ay qaybtii ugu danbeysey buuxa, waxaa jira xoogaa fursado:
curyaamiyaa ee plugin Transposh ee hadda, Ka hubi updates, cusboonaysiiso si version 0.9.5 laga bilaabo wordpress.org, kiciyo plugin ku, Markos “oggolaadaan update si nooca buuxa” iyo casriyeyn mar
delete version aad hadda of plugin iyo rakibi version laga soo wordpress.org oo raac habka update ah
joogu u Filed under Wararka iyo uun loo beddelo files ku on your server.
Waxaan nahay si dhab ah uga xumahay carqalad ku saabsan
Maxaa kale waa cusub?
Luqado badan ayaa iyana ku daray in ay engine Google, beddelo tirada guud si 82 luqado taageeray!
Maxaa ku saabsan 0.9.4?
Waxa uu ahaa version a lovely, arrimaha go'an oo taageero ka wakiil Google, waxaan soo qoray waa post a full ku saabsan too, sidaas 0.9.4, please accept our apology 😉
Enjoy version cusub, hana ka baqan in ay na soo war gali arrimaha kasta
Nabad gelyo wordpress.org
May 1, 2013 by dalabyo 44 Comments
Sidaas dheer, waxaan ahaayeen suckers ah… 🙁
Afar sano ka dib si bakhaar oo wordpress, iyo 189,795 downloads dambe, Transposh ka tagayaan bakhaar wordpress.org ah.
Sida cad, wakhtiga oo dhan ka this our widget lahaa link a to our site, inkastoo ay suurto gal ahayd in ay iska saarto, waxa uu kasoo horjeeday tilmaamaha wordpress.org.
Tani waa tilmaan ah in aynu ma aqbali karaan, waxaan rumaysan nahay inaynu mudan credit for shaqadayada. Aan ka yarayn twitter, facebook, ama shirkad kasta oo kale oo si fiican u yaqaan bixinta xisbiga saddexaad Widgets waxaa.
Waxa kale oo aanu ma aqbali karo xaqiiqada ah in aannu plugin waa laga saari karaa ogeysiis la'aan doonaa, iyo iyada oo aan waqti kasta si ay isbeddel ku samayso, xaq u baxay oo ah buluug ah.
Ma aqbali karno in farriimo in aanu post on forum plugin waxaa laga saari doonaa oo kaliya sababtoo ah Wararka aysan jeclayn, ama ay go'aansadaan in ay ka dhanka ah sharciyada yihiin in ay naftooda abuuray. Xeerarka aanay rabin in ay dib u.
Waxay lacag la'aan ah si go'aan kasta oo ay jecel yihiin yihiin, ka dib dhammaan, its ay hosting iyo xeerarka ay. Illowsiin kartaa in, Nasiib wanaag ku filan oo aynaan haysan inay aqbalaan.
Haddii aad rabto inaad ka cabato, ma halkan ka caban, isku day iyo caban on forums ah, laakiin Malahayga waa in laguu this doona, wordpress.org ma waa dal dimuquraadi ah, midna waa a Reserved site waafaqsan, wax kasta waa in uu jiraa free, in qiimaha, iyo in hadalka, taasna waxaa sabab u aad heshay tan oo plugins xoogdaran iyo in keliya u adeegto sidii kor u qaadida si version a pro. Tani waxay sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in aan kula Transposh qaban. Oo annaguna waxaannu ha jeclaan, ma mid qayb.
Haddii version a soo socda in abid si uploaded to site in, waxa uu noqon doonaa version xoogdaran, (iyada oo aan wax ka here links, hubaal) iyo ma version ugu usable. Version The latest (non curyaamiyay) in la xaq here marsiin doono on the download page. Si taas oo aan hadda haysanno doonaan in ay ku darto farsamo la update ah.
Waad u wada hadlaan this ee halkan comments ee.
Wordpress.org Sidaas dheer, iyo mahad for kalluunka oo dhan.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: wordpress.org